Posted by ညီလင်းသစ် au 18.11.08
kom: ပြင်တုံးဆင်တုံးထင်တယ်။ (၂) ကိုဘဲမြင်ရပါသေးတယ်။ ညီလင်းသစ်.
Autumn (2) ပဲတွေ့ရတယ်။
kom: အကုန်မြင်ရပါပြီး :P
19 nov 08, 15:55
kom: လှလိုက်တာ။ ဟိုကင်မရာကြီးနဲ့ ၇ိုက်တာလား။
Whatabeautiful snaps!!
Autumn 2,5,6 ကြိုက်တယ်။ blog အတွက် ဘန်တာတောင် လုပ်ဖို့ကောင်း....
November 21, 2008 at 3:11 AM
မခင်ဦးမေ၊ Sin Dan Lar...ကျနော် setting တစ်ခုမှား သွားလို့ ပုံတွေချက်ချင်းမပေါ်တာ sorry ပါဗျာ...၊ စိတ် ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ဆိုင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ၊
ညီမ SMNTL, အမမေငြိမ်း, Everest...မှတ်ချက်လေး တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား.....။
Autumn Leaves(Roger Williams)
ကင်မရာကြီးရော ရှုခင်းရော ပိုင်ချင်တယ်.. ဟင့် sob..
Ko Nyi lin thit,
I am one of your blog visitors. The photos are very nice. May I know which country? cool ^_^
Mon Myat Thu